Muuri News Network » DAAWO Vidio: Howlgalka AMISOM oo Isbedel Lagu Sameeyay & Halis Cusub..
DAAWO Vidio: Howlgalka AMISOM oo Isbedel Lagu Sameeyay & Halis Cusub..
Tan iyo markii ciidamada Midowga Afrika ee howlgalka AMISOM u jooga Soomaaliya ay la kulmeen weeraro toos ah iyo qaraxyo ay ku qaadayeen dagaalyahanada ururka Al-Shabaab, ayaa waxay taasi sababtay in isbedel lagu sameeyo guud ahaan ciidamada ka socda dalalka Afrika ee Soomaaliya ku sugan.
Dowladda Uganda oo ka mid ah dalalka ciidamada ugu badan ku leh howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa bilowday inay fuliso qorsheyaal Midowga Afrika uu wax uga qabanayo fashilka hareeyay ciidamada AMISOM.
Cutubyo ka tirsan ciidamada Uganda oo ku sugan degmada Baraawe ayaa la bedelay gebi ahaanba, iyadoo lagu bedelay ciidamo kale oo isla dalkaasi ka socda, kuwaasi oo dhowaan tegaya goobihii ay banneeyeen ciidamadii la bedelay oo iyaguna gaaray magaalada Kampala.
Taliyaha ciidamada la bedelay oo lagu magacaabo Col. Silvio Aguma ahna taliyaha ciidamada lugta oo u dhashay dalka Uganda ayaa sheegay mudadii ay joogeen inay qabteen howl wanaagsan iyagoo goobo badan ka saaray maleeshiyada Al-Shabaab.
Col. Bob Ogik oo ah Taliyaha ciidamada cusub ee soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa la filayaa inay gaaraan degmada Baraawe, halkaasi oo dhowaan laga saaray ururka Al-Shabaab, inkasta oo xilliyada qaarkood ay ka dhacaan weeraro ay ku qaadayaan ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM.
Dalalka Jabuuti, Uganda, Burundi, Itoobiya iyo Kenya oo dalka Soomaaliya ay ka joogaan ciidamo ayaa sanad kasta bedelaya ciidamadii hore kuna bedelaya ciidamo cusub oo ka tababar wanaagsan kuwii hore.